दैलेख आत्मनिर्भर बनाउने साझा प्रयास : वृहत्तर उत्पादन, एकीकृत बजार र बैंक स्थापना « Rara Pati
दैलेख आत्मनिर्भर बनाउने साझा प्रयास : वृहत्तर उत्पादन, एकीकृत बजार र बैंक स्थापना
दैलेख जिल्ला ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक रूपमा अब्बल तथा धनी जिल्लामा पर्दछ । २८ वटा जातजातीको उद्गम स्थल, पञ्चकोशी तिर्थ स्थल, खानी, पानी र जडिवुटीमा समेत धनी जिल्लामा पर्दछ दैलेख । तथापी दैलेख जिल्लाको भौतिक विकास, शैक्षिक विकास र आर्थिक विकासलाई सुक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने जति विकास हुनु पर्दथ्यो त्यती विकास नभएको हो । यस विषयमा दैलेखका सर्वपक्षिय अगुवाहरूले दीर्घकालीन साझा सोंच बनाउन आवश्यक छ ।
लघु उद्यमका क्षेत्रमा दैलेख जिल्ला ७७ वटै जिल्लामध्ये राम्रो काम गरी राम्रो परिणाम निकाल्ने जिल्लामा पर्दछ । हाल दैलेख जिल्लामा आजसम्मको अवस्था हेर्दा झण्डै ९ हजार जना लघु उद्यमीहरू रहेका छन् । तीमध्ये झण्डै ८५ प्रतिशत लघु उद्यमीहरूले सफलतापूर्वक आ–आफ्ना लघु उद्यमहरू सञ्चालन गरी आत्मनिर्भर बन्न सफल भएका छन् । स्थानीय साधन स्रोत, आफ्नै सीप र जाँगर तथा थोरै लगानी गरेर आफूलगायत समाजलाई समेत आत्मनिर्भर बनाउन सफल भएका छन् । १० प्रतिशत लघु उद्यमीहरू साना उद्योगीमा रूपान्तरण भइसकेका छन् भने ५ जना लघु उद्यमीहरू मझौला उद्योगमा रूपान्तरण भई कर्णाली प्रदेश कै नमूना उद्योग स्थापना गर्न सफल भएका छन् ।
नेपाल सरकारका तीनवटै अङ्गहरू (स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय), दातृ निकायहरू, विभिन्न सहयोगी संघ/संस्थाहरूको साझा प्रयासबाट २०६६ सालदेखि दैलेखलाई उद्यमशीलता र कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने सकारात्मक प्रयास जारी रहेको छ । यसै सन्दर्भमा सुरुमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम र अहिले गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रममार्फत् दैलेखलाई ‘लघु औद्योगिक हव’ बनाउने क्रमले तिव्रता पाएको छ । लघु उद्यमका क्षेत्रमा दैलेख जिल्ला ७७ वटै जिल्लामध्ये राम्रो काम गरी राम्रो परिणाम निकाल्ने जिल्लामा पर्दछ ।
हाल दैलेख जिल्लामा आजसम्मको अवस्था हेर्दा झण्डै ९ हजार जना लघु उद्यमीहरू रहेका छन् । तीमध्ये झण्डै ८५ प्रतिशत लघु उद्यमीहरूले सफलतापूर्वक आ–आफ्ना लघु उद्यमहरू सञ्चालन गरी आत्मनिर्भर बन्न सफल भएका छन् । स्थानीय साधन स्रोत, आफ्नै सीप र जाँगर तथा थोरै लगानी गरेर आफूलगायत समाजलाई समेत आत्मनिर्भर बनाउन सफल भएका छन् । १० प्रतिशत लघु उद्यमीहरू साना उद्योगीमा रूपान्तरण भइसकेका छन् भने ५ जना लघु उद्यमीहरू मझौला उद्योगमा रूपान्तरण भई कर्णाली प्रदेश कै नमूना उद्योग स्थापना गर्न सफल भएका छन् । दैलेखका लघु उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका केही वस्तुहरू सिस्नो पाउडर, अल्लोको धागो र नेपाली हाते कागज विश्व बजारमा बजारीकरण भइरहेका छन् । यस परिणामले के बताउँछ भने दैलेखका करिब ९ हजार घर परिवार पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सफल भएका छन् । लघु उद्यममार्फत् ६० प्रतिशत व्यवसायिक कृषकहरू, १० प्रतिशत वनमा आधारिक लघु उद्यमीहरू, १० प्रतिशत सेवामा आधारित लघु उद्यमीहरू र अन्य विषयका लघु उद्यमीहरू अहिले आ–आफ्ना लघु उद्यममार्फत् स्वरोजगार बनिरहेका छन् । कूल जम्मा ५५ हजार जना अहिले लघु उद्यममार्फत् स्वरोजगार बनिरहेका छन् ।
लगानी र नाफाका दृष्टिकोणले लघु उद्यमहरूको अवस्था हेर्ने हो भने दैलेखका लघु उद्यमीहरूले २ अरब ७० करोड जति पूँजी लगाएको अवस्था छ । ९ हजार लघु उद्यमीहरूले वार्षिक सालाखाला १ अरब ८ करोड नाफा लिन सफल देखिन्छन् । यो नाफा त्यहीको स्थानीय स्रोत, साधन र सीप भएकाले जिल्लाकै पूर्ण आम्दानी हो भन्नुमा दुईमत नहोला । यस विषयमा यति नै चर्चा गरौं ।
दैलेख जिल्लालाई थप आत्मनिर्भर, स्वरोजगार बनाउन यतिखेर जिल्ला लघु उद्यमी समूह संघ, दैलेख र आत्मनिर्भर लघु उद्यम कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले नयाँ अभियानको प्रारम्भ गरेको छ । जसका तीन वटा कार्यहरू रहेका छन् ।
क) उत्पादन :
दैलेख जिल्लाको मूख्य आम्दानीको स्रोत कृषि भएकाले लघु उद्यममार्फत् सञ्चालित कृषि फर्महरूलाई थप स्तर उन्नती गर्न, उत्पादनको परिमाण बढाउन एकीकृत अभियान थालिएको छ । दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमा सहकार्य गरी कृषि पेशालाई व्यवसायिक बनाउन र अवको ३ वर्षमा दैलेखलाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउन यो अभियान सुरु भएको हो । अभियानको मूल उद्देश्य श्रमलाई जमिनमा जोड्ने, व्यवसायिक कृषि प्रणालीलाई सारभुत रूपमा नै सफल बनाउने र दैलेखका युवाहरूलाई विदेशिनबाट जोगाउने नै हो ।
जिल्ला लघु उद्यमी समूह संघमा अहिले ८ हजार लघु उद्यमीहरू आवद्ध रहेका छन् भने सहकारीमा ३६८ जना महिला लघु उद्यमीहरू आवद्ध रहेका छन् । यी मध्ये ७० प्रतिशत जति लघु उद्यमीहरू व्यवसायिक कृषि पेशामा आवद्ध रहेका छन् । दैलेख जिल्लाको मूख्य आम्दानीको स्रोत कृषि भएकाले लघु उद्यममार्फत् सञ्चालित कृषि फर्महरूलाई थप स्तर उन्नती गर्न, उत्पादनको परिमाण बढाउन एकीकृत अभियान थालिएको छ । दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमा सहकार्य गरी कृषि पेशालाई व्यवसायिक बनाउन र अवको ३ वर्षमा दैलेखलाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउन यो अभियान सुरु भएको हो । अभियानको मूल उद्देश्य श्रमलाई जमिनमा जोड्ने, व्यवसायिक कृषि प्रणालीलाई सारभुत रूपमा नै सफल बनाउने र दैलेखका युवाहरूलाई विदेशिनबाट जोगाउने नै हो । दैलेखमा अवको ३ वर्षमा ४५ सय कृषि फर्महरू साना उद्योगको रूपमा रूपान्तरण गर्ने, २५ हजार लघु उद्यम फर्महरू स्थापना गर्ने, ११ वटा पालिका स्तरीय औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने, १ वटा जिल्ला स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र एक वडा १ सङ्कलन केन्द्र तथा हाट बजार सञ्चालन गर्ने अभियानको मूल उद्देश्य रहेको छ । जसका कारणले वार्षिक करिब १० अर्व बराबरको माल उत्पादन हुनेछ । यो उत्पादनमुखी अभियानमा सहकारीहरू, समूह र अगुवा कृषकहरूलाई अगुवाईको भूमिका निर्वाह गर्न र लगानी लगाउनका लागि उत्प्रेरणा र आवश्यक सहयोग, सहकार्य हुनेछ ।
ख) दीगो बजार ब्यवस्थापन :
दैलेखको जिल्ला लघु उद्यमी समूह संघ र आत्मनिर्भर लघु उद्यम कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले एकीकृत दीगो बजार व्यवस्थापनको अभियान सुरु गरेको छ । दैलेखका लघु, कृषि उद्यमीहरूले उत्पादन गरेको बजारको सुनिश्चितता गर्नका लागि ‘दैलेख सौगात गृह’ सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको छ । दैलेख सौगात गृहको मूख्य उद्देश्य लघु, किसान उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका सम्पूर्ण वस्तुहरू खरिद गर्ने, ती उद्यमीहरूलाई आवश्यक पर्ने मेसिन, औजार प्रविधि, कच्चा पदार्थ सुलभ दरमा उपलब्ध गराउने, उद्यमी, किसानहरूलाई प्राविधिक सेवा, व्यवसायिक योजना निर्माण, प्रस्तावना लेखन र वित्तिय सहयोग गर्ने रहेको छ ।
दैलेख जिल्लाको उत्पादन जे जति हुने गरेको छ, उक्त उत्पादनको भरपर्दो र एकीकृत बजार व्यवस्थापन नहुँदा उद्यमी, किसानहरू समस्यामा परेका छन् । समस्यामा मात्र होइन, व्यवसायिक कृषि पेशामा सङ्लग्न नहुने र भएकाहरूले पनि कृषि पेशा त्याग्ने गरेका छन् । यसका लागि दीगो बजार व्यवस्थापन नै प्रमुख विषय हो । यहि कुरालाई आत्मसात गर्दै दैलेखको जिल्ला लघु उद्यमी समूह संघ र आत्मनिर्भर लघु उद्यम कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले एकीकृत दीगो बजार व्यवस्थापनको अभियान सुरु गरेको छ । दैलेखका लघु, कृषि उद्यमीहरूले उत्पादन गरेको बजारको सुनिश्चितता गर्नका लागि ‘दैलेख सौगात गृह’ सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको छ । दैलेख सौगात गृहको मूख्य उद्देश्य लघु, किसान उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका सम्पूर्ण वस्तुहरू खरिद गर्ने, ती उद्यमीहरूलाई आवश्यक पर्ने मेसिन, औजार प्रविधि, कच्चा पदार्थ सुलभ दरमा उपलब्ध गराउने, उद्यमी, किसानहरूलाई प्राविधिक सेवा, व्यवसायिक योजना निर्माण, प्रस्तावना लेखन र वित्तिय सहयोग गर्ने रहेको छ । जसका लागि दैलेख जिल्लाका ५ हजार लघु, किसान उद्यमीहरूले हाल प्रति उद्यमी न्यूनतम २ हजार नगद वा जिन्सि सेयर रकम सङ्कलन गरी आफ्नै लगानीमा दैलेख सौगात गृह सञ्चालन हुँदैछ । यो आलेख तयार पार्दासम्म ६ लाख ८० हजार रकम सेयर सङ्कलन भइसकेको छ ।
यो महाअभियानमा दैलेखका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधीहरू, कर्मचारीहरू, उद्योगीहरू, कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरू र प्रदेश सभा सदस्यहरू लगायतबाट सेयर सङ्कलन गरी अवको २ वर्षमा २ करोड सेयर सङ्कलन गर्ने योजना समेत रहेको छ । दैलेख सौगात गृहको दिगोपनाका लागि केही आधारभूत नीति निर्देशनहरू तयार पारिएको छ ।
क) विक्री केन्द्रमा सिसी टिभी जडान र निगरानी
ख) सञ्चालक समिति निर्माण
ग) सफ्टवेयर जडान
ग) सम्पूर्ण कारोवार वैकिङ्ग प्रणालीबाट
घ) दैलेखका प्रत्येक वडामा १/१ जना सङ्कलककर्ता परिचालन
ङ) कृषि एम्बुलेन्स र ढुवानी गाडी प्रयोग
च) दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहका सदरमूकामहरूमा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण र सञ्चालन
छ) कानुनी वैधता हुने गरी किसान र सङ्कलनकर्ताबीच खरिद विक्रीको करार सम्झौता तथा जिल्लाका विक्रेताहरू र प्रदेश स्तरीय खरिदकर्ताहरूबीच खरिद सम्झौंता
ज) १ लाखभन्दा कमको माल नगदमा खरिद, १ लाखभन्दा माथिको खरिद गर्दा ६० प्रतिशत तत्काल भुक्तानी, २० प्रतिशत १५ दिनमा र २० प्रतिशत ३० दिनमा भुक्तानीको ग्यारेण्टी गर्ने ।
यी आधारभूत नियमको परिधिमा रही न्यूनतम तलव र अधिकतम् कमिशनमा कर्मचारी परिचालन गर्ने गरी दैलेख सौगात गृह सञ्चालन हुँदैछ । ३ वर्षपछि दैलेख सौगात गृहलाई लिमिटेड कम्पनीमा रूपमान्तरण गरी स्थानीय स्रोत र साधन प्रयोग गरी दैलेख जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो प्रशोधन केन्द्रका रूपमा स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको छ । प्रशोधन केन्द्र भन्नुको तात्पर्य जस्तै खुर्सानी, काउली, मूलाको अचार बनाउने, टमाटरको सस बनाउने, आँप, अम्बा लगायतका वस्तुको जुस बनाउने आदी पर्दछन् ।
यति मात्र होइन, खरिद बिक्री सम्झौंता गर्नु पूर्व किसान र उद्यमीहरूलाई वार्षिक वाली पात्रोको खाका उपलब्ध गराउने र किसानले कुन महिना कति परिमाणमा उत्पादन गर्न सक्छ, के–के उत्पादन गर्न सक्छ ? आफै स्वघोषणा गरेपछि मात्र दोहोरो खरिद विक्री सम्झौंता गर्ने अभियान सञ्चालन गरिएको छ ।
ग) बैंक स्थापनाः
अबको ढिलोमा ३ वर्षमा बैंक स्थापना भई सक्नेछ । यो बैंक स्थापना गर्नुको मूल उद्देश्य गाउँका किसान र लघु उद्यमीहरूलाई सहज र सुलभ व्याजमा ऋण उपलब्ध गराई उद्यम र कृषि पेशालाई दीगो बनाउनु रहेको छ । गाउँका उद्यमी, किसानले ऋण माग गरेको ७ दिन भित्र ऋण उपलब्ध गराउने, सुलभ दरमा, परियोजनाका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ बैंक स्थापना गर्न लागिएको छ ।
माथिका दुई वटा कार्य गर्नका लागि पूँजीको ठूलो आवश्यकता पर्दछ । तसर्थ दैलखका आम नागरिक, उद्यागी, व्यापारीहरूको साझा प्रयासबाट दैलेखमा नै केन्द्रीय कार्यालय हुने गरी बैंक स्थापना गर्ने कार्य पनि अघि बढेको छ । अबको ढिलोमा ३ वर्षमा बैंक स्थापना भई सक्नेछ । यो बैंक स्थापना गर्नुको मूल उद्देश्य गाउँका किसान र लघु उद्यमीहरूलाई सहज र सुलभ व्याजमा ऋण उपलब्ध गराई उद्यम र कृषि पेशालाई दीगो बनाउनु रहेको छ । अहिलेको सन्दर्भमा उद्यम स्थापना, स्तर उन्नती, व्यवसायिक कृषि गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ऋण गाउँको जग्गा धितो राखेर ऋण माग गर्दा कुनै पनि बैंकले नपत्याएको अवस्था छ । अपवादको रूपमा, त्यो पनि अति चर्को ब्याजमा मात्र ऋण पाएको अवस्था छ । यो अवस्थालाई चिरफार गर्न गाउँका उद्यमी, किसानले ऋण माग गरेको ७ दिन भित्र ऋण उपलब्ध गराउने, सुलभ दरमा, परियोजनाका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ बैंक स्थापना गर्न लागिएको छ । जसको नेतृत्व र अगुवाई जिल्ला लघु उद्यमी समूह संघ र आत्मनिर्भर लघु उद्यम कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले गरिरहेको छ ।
कुनैपनि काम गर्नलाई पहिला ज्यूँदो सपना देख्नु पर्दछ, त्यो सपनालाई साकार पार्न भरपर्दो समूहको आवश्कता पर्दछ र समूह भएर मात्र होइन, दीर्घकालीन सोंच, ठोस कार्ययोजना, दृढता आवश्यक पर्दछ । दैलेख जिल्लाका ९ हजार लघु उद्यमी तथा किसानहरूले यहि ठोस कार्ययोजना, दृढ सङ्कल्प र ज्युँदो सपना देखेर अघि बढेको अवस्था छ । कार्य गर्दा समाजले अनेक प्रकारले सोच्ने गर्दछ, सकिन्छ वा सकिन्न, सफल भइन्छ वा भइन्न ? आदि तर्कहरू उब्जने गर्दछन् तर यर्थाथमा सकिन्छ भन्ने नै हो । हामी सबैले साझा योजना बनाएर आवश्यकताका आधारमा अघि बढने हो भने सम्भव छ ।
यसका साथै स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार लघु उद्यमी, किसानहरूको पक्षमा छ । हामी लघु उद्यमी तथा किसानहरूले अघि बढाएको कदमलाई नेपाल सरकारले अवश्य पनि सहयोग गर्नेछ । अभिभावकत्व प्रदान गर्नेछ । कानुनी वैधतासहित अवको ३ वर्षपछि दैलेख जिल्ला पूर्ण रूपमा नभए पनि अहिले अवस्थाभन्दा कम्तिमा ५० प्रतिशत बढि रूपमा आत्मनिर्भर बन्नेछ, गाउँका किसान, उद्यमीहरूले सहज रूपमा र परियोजना तथा गाउँको जमिन धितो राखेर सुलभ ब्याजमा आवश्यकता अनुसारको ऋण पाउने छन् भने दैलेखको उत्पादन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बजार मूल्य शृङ्खलाको आधारमा बजारीकरण हुनेछ । यसका लागि जिल्ला लघु उद्यमी समूह संघ र आत्मनिर्भर लघु उद्यम कृषि सहकारी संस्थाले हाल अगुवाई गरे पनि १ वर्ष पछि दैलेखका सम्पूर्ण सहकारी, समूहहरू, उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका संस्थाहरू पनि जोडिने छन् । नेपाल सरकारले यो कार्यको अभिभावकत्व प्रदान गर्नेछ । हामी लघु उद्यमीहरूले यहि आशा र भरोसाका साथ दैलेखमा महाअभियान सञ्चालन गरिहेका छौं ।
(लेखक खत्री राष्ट्रिय लघु उद्यमी महासंघका कार्यवहाक अध्यक्षका साथै दैलेखको जिल्ला लघु उद्यमी समूह संघका पनि अध्यक्ष हुन् ।)